Hey'adaha u xil saaran Dib u eegista Dastuurka iyo Garsoorka Galmudug oo ku shiray Dhuusamareeb - Jowhar Somali news Leader
Home News Hey’adaha u xil saaran Dib u eegista Dastuurka iyo Garsoorka Galmudug oo...
Hey’adaha u xil saaran Dib u eegista Dastuurka iyo Garsoorka Galmudug oo ku shiray Dhuusamareeb
Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad Gobleedka Galmudug ku qabsoomay kulan u dhaxeeyay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka, Gudigga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka, Gudigga Madaxbanaan Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka, iyo bahda Garsoorka iyo Sarci yaqaanada ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Kulanka ayaa waxaa ugu horeeyn ka hadlay Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Galmudug Mudane Abshir Cabdi Shiikhoow isaga oo faahfaahin ka bixiyay qaab-dhismeedka iyo sida dhow ee ay u wada shaqeeyaan hay’adaha Garsoorka ee Galmudug.
Intaa kadib, Gudoomiyaha Gudigga Baarlamaanka ee La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa ku booriyay garsoorayaasha iyo sharciyaqaanada Galmudug inay si dhow ula socdaan howlaha dib-u-eegista dastuurka oo sameeyn aad u weyn ku leh shaqadooda.
Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee XFS Mudane Saalax Axmed Jamaac oo kulanka furay ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay howlaha dib-u-eegista dastuurka iyo arrimaha cadaaladda oo ah kuwo aad isugu dhow.
“Sidaad ogtihiinba dalka Soomaaliya waxaa sanado badan ka socday geedi-socodka dib-u-eegista dastuurka oo iminka gebogebo ku dhow, si loo dhameeystiro geedi-socodkaas waxaa lagama maarmaan ah in laga heshiiyo qodobada u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed inay ka galaan dowaladda dhexe iyo dowlad goboledyada oo ay kamid tahay hannaanka iyo qaabdhismedka cadaaladda; waxa ugu weyn ee kulankan aan ka sugeyno waa inaan dhageeysano talooyinkiina ku aadan arintaa” ayuu yiri Wasiirka.
Gebogabadii, bahda Garsoorka iyo Sharciyaqaanada Galmudug ayaa ballanqaaday talooyinkooda oo dhameeytiran inay muddo bil gudaheed ah la soo wadaagi doonaan hay’adaha u xilsaaran dib-u-eegista dastuurka.